लामो बाटो र धेरै कुइनेटा छिचोलेँछु
प्रस्तुति: दीपक सापकोटा
निबन्धकार युवराज नयाँघरेले 'एक हातको ताली’ निबन्ध कृतिका लागि विसं २०६५ को मदन पुरस्कार पाएका छन् । नयाँघरे झर्रो र विशुद्ध नेपाली अनुहार भएका निबन्ध लेख्छन् । शंकर लामिछानेको एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याजले निबन्धमा मदन पुरस्कार पाएको लामो समयपछि युवराज नयाँघरेले यसको बिँडो थामेका छन् । पुरस्कार घोषणा भएको भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार नयाँघरे बागबजारमा भेटिए । त्यही मौका छोप्यौँ हामीले । छोटो भलाकुसारीमा निबन्धबारे उनले बोलिदिए,'निबन्धका विषय त बादलभित्रका झिल्का रहेछन् ।’
मदन पुरस्कार पाउँदा कस्तो अनुभूति भयो ?
खबर सुन्दा सुरुमा त विश्वासै लागेन । त्यसवेला झमझम पानी पर्दै थियो । म वसन्तपुर दरबारमुनि थिएँ । एकजना पाठकले फोन गरेर सुनाए । म त चकित परेँ । यो मेरो स्वप्न योजना थियो । जहिलेदेखि मैले लेख्न थालेको थिएँ, त्यसैवेलादेखि देखेको सपना पूरा भएजस्तो लाग्यो ।
मदन पुरस्कार पाएको उचाइको यो बिन्दुमा उभिएर तलतिर हेर्नुपर्दा कस्तो महसुस हुन्छ ?
मैले दुःखका गोरेटोहरू हेरेजस्तो ंलाग्यो । दुःखका अग्ला जँघार, फग्लेटाहरू फ्ल्यास्ब्याकमा आए र सँगसँगै गए । पसिना चुहिएका क्षण सम्झन्छु । निकै लामो बाटो र धेरै कुइनेटा छिचोलेँछु भन्ने लाग्यो ।
जिन्दगीमा सपना के थियो ?
सानोमा पहाड घर इलाममा छँदा म भैंसी चराउन जान्थेँ । भैंसीमाथि चढेर सामान्य ज्ञानको पुस्तक पढ्थेँ । त्यसवेला मदन पुरस्कार पाउने लेखकबारे पनि पढिन्थ्यो । तर, मलाई लेखक बन्छु भन्ने थिएन । रेडियोमा समाचार वाचक बन्छु भन्ने लाग्थ्यो ।
शंकर लामिछानेको निबन्धसंग्रह 'एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याज’ले मदन पुरस्कार पाएको लामो समयपछि तपाईंको निबन्धले मदन पुरस्कार पाएको छ । त्यसपछि लगभग मरेको निबन्ध विधा अब ब्युँझिएको हो ?
मदन पुरस्कार पाएको शंकर लामिछानेको एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याजले अहिलेसम्म पनि नेपाली निबन्धमा एउटा प्रतिक्रिया उत्पन्न गराइरहेको छ । फेरि लामो समयपछि मैले पाएँ । यो एउटा आइसब्रेक हो । निबन्धलाई हिजोको आँखाले हेरिन्थ्यो । यसमा हामीले नयाँपन ल्यायौँ । निबन्ध पढ्न नचाहने पुस्तालाई पनि पढ्न बाध्य गरायौँ । समाजले पढेछ पनि । निबन्ध फेरि ब्युँझिएछ ।
तपाईंको 'एक हातको ताली’सँगको प्रतिस्पर्धामा कुन पुस्तक थियो ?
मलाई सबै त थाहा छैन । तर, लेखक नारायण ढकालको 'पे्रतकल्प' उपन्यास थियो भन्ने सुनेको थिएँ । त्यो उपन्यास पनि निकै राम्रो थियो ।
एउटाले मदन पुरस्कार पाएपछि प्रतिस्पर्धाका अरू किताबचाहिँ कमजोर भएका हुन् ?
त्यसो होइनन् । अरू किताब पनि निकै राम्रा छन् । सबै बराबर हुन् । जाँचकीको आँखा र मनलाई कुनले छोयो, त्यति मात्र फरक हो ।
निबन्धलाई हेला गरिएको थियो, तपाइंको निबन्धले मदन पुरस्कार पाएपछि अब नेपाली निबन्धको गति कस्तो हुन्छ ?
ऊर्जाशील बाटो समाउँछ निबन्धले । गम्भीर विधामा पनि लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रभाव लेखकहरूमा पर्नेछ । हल्काफुल्का साहित्य लेख्ने जमात पनि गम्भीर विधामा आउने संकेत हो यो । अब निबन्धमा पनि लाग है भनेर हरियो झन्डा देखाइएको हो ।
'एक हातको ताली’को हिरो न्याङरुङे कटुवाल एक हातले चिया बनाउँछ र अर्को हातले ताली बजाएर पार्टीलाई सघाउँछ । त्यस पात्रले केलाई संकेत गर्छ ? उसको मनोदशा के हो ?
त्यो यर्थाथ पात्र हो । नेता सिपी मैनालीसँगै पछि लागेर सहर पसेको एउटा कार्यकर्ता हो, न्याङरुङे कटुवाल । सिपी झन्डा हल्लाउँदै महल पसे । तर, देश र राजनीतिलाई माया गर्ने न्याङरुङे एक हातले भएपनि ताली बजाएर राजनीति र नेताहरूलाई स्वागत गरिरह्यो । न्याङरुङे एउटा निर्धो पात्र हो, जो देशका ठूला परिर्वतन टोलाएर हेरिरहन्छ ।
पाठकहरूको भनाइ छ, तपाईंका निबन्ध नबुझिने हुन्छन् । तपाईंका निबन्धमा शब्दहरूको मात्र खेती हुन्छ पनि भन्छन् । शब्दार्थ पहिलो पाइलो हो । शब्दै नबुझीकन भाव कसरी बुझ्ने ?
म ठेला चलाउने, सडकमा बसेर मकै भुट्ने वर्गका लागि कहिल्यै साहित्य लेख्दिनँ । मेरा निबन्ध नबुझिने हुँदैनन् । बौद्धिक वर्गले मेरा निबन्ध बुझ्छन् । निबन्ध त मेरो जिन्दगीको साधना हो । ज्ञानको सिर्जना एकरातमा आउँदैन । ती निबन्ध जन्माउन मैले कयौं रात खर्चिएको छु ।
तपाईं अमेरिकामा दुई वर्ष बस्नुभयो, अमेरिकामा बस्ने नेपालीका दुःख पनि निबन्धमा लेख्नुभएको छ ?
नेपालीका दुःख उस्तै रहेछन् । त्यहाँ नेपाली सुखी छन्, तर खुसी छैनन् । त्यहाँ पनि कुरा काट्ने समाज छ । हेला गर्ने समाज छ । नेपालीहरूलाई समस्या छ भूमि छोड्नुको । जीवन भद्रगोल छ उता । म त रमाउन सकिनँ र फर्किएँ । ती दुःख मैले निबन्धमा लेखेको छु । ती निबन्ध अब प्रकाशित हुनेछन् ।
यदि युवराज नयाँघरे अमेरिकामै रमाएको भए, यी संयोग जुर्थे होलान् ?
अँह, जुर्दैनथो संयोगहरू । म उतै कतै शून्यमा बिलाउँथे होला । उता जीवन छ, तर यान्त्रिक छ । यन्त्रले बनाएको कमारो जीवन होइन रहेछ । हामीलाई त नेपाली शीतमा टेक्नु छ, भैंसीको पिठ्यँुमा चढ्नु छ, गाईको भकारो सुँघ्दै हिँड्नु छ । र, ती सबै नेपालमा मात्रै पाइन्छन् । उता त उराठलाग्दा प्रविधिसँग जिस्किनु मात्र छ ।
तपाईं दैनिक लेख्नुहुन्छ कि कुनै निश्चत समय छ ?
दैनिक त कहाँ लेख्नु ? मेरो योजना वर्षको दुईवटा राम्रो निबन्ध लेख्नु हो । एक शब्दले पनि बीउको काम गर्छ । कुनै ठूलो कुरा चाहिँदैन । लेख्नका लागि वातावरण, परिवेश बनाउन समय लाग्ने रहेछ । लेखकले दैनिक लेख्नहुन्न । अति लेख्नु हानिकारक हो । थोरै सन्तान पाएकी आमा शक्तिशाली हुन्छिन् । र, धेरै सन्तान पाएकी आमा रोगी । त्यसैले लेखक पनि थोरै सन्तानकी आमाजस्तै शक्तिशाली हुनुपर्छ ।
लेखाइमा रुचि कसरी बस्यो ? रुचि बढाउने कोही थिए ?
लेख्नमा म कसैबाट पनि प्रेरित भइनँ । यो त एउटा कला रहेछ । मेरो कलाले बाटो खोजिरहेको रहेछ । गाउँमा भैंसी चराउन जाँदा, रूखका पातहरू हल्लेको देख्दा मेरो मनमा अनेक कुराहरू खेल्थे । म जुरेली कराएको सुनिरहन्थेँ, खोलाको बालुवामा अक्षरहरू लेख्थेँ । बरू लेखाइमा मेरी आमाको केही प्रभाव थियो कि जस्तो लाग्छ । मेरी निरक्षर आमा 'गुणरत्नमाला' गुन्गुनाउनुहुन्थ्यो । त्यो सुनेर पनि रमाइलो लाग्थ्यो । मैले स्कुल पढ्दै विश्व-साहित्यका किताबहरू पढ्न पाएँ, खोलाका सुसाहट र चराका सुसेलीले लेख्नतिर डोर्‍याए सायद ।
कसरी आउँछन् लेख्ने विषय वा लेख्नेवेला कुनै विशेष तयारी हुन्छ ?
विषय त बादलभित्रका झिल्का रहेछन् । घटनाले छुन्छ अनि लेखिन्छ । मैले सधैं देखिरहेको दृश्यले पनि कतै चिमोटिरहेको हुन्छ । मेरा लेखाइ समाजका चोटहरूको अभिव्यक्ति हो । लेख्न त्यस्तो खासै तयारी हुँदैन ।
तपाइं कथा, कविता कहिल्यै पनि लेख्नुहुन्न, निबन्धमा मात्रै किन यस्तो सम्मोहन ?
निबन्धमा निर्बन्ध हुन पाइन्छ । यो बन्धन नभएको उडान हो । अरू लेखाइमा पात्रसँग अल्भि
mनुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र हुन पाइन्न । मलाई त्यही स्वतन्त्र उडानले छोयो ।
मदन पुरस्कारको साख जोगाइरहन सक्छु जस्तो लाग्छ ?
यो साख जोगाउन सक्छु । झन् अब मेरो काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ । एउटा लक्ष्य पनि छ, टाढाको । अब अरू पहाड ताकेर हिँड्नु छ । मलाई अरू विधामा फड्को मार्ने मन छ ।
नेपाली साहित्यमा सौन्दर्य कति भेटिन्छ ?
मेरा निबन्धलाई म सौन्दर्यप्रधान बनाउने कोसिसमा रहन्छु । सौन्दर्य मेरा निबन्धका मुटु हुन् । अरू नेपाली साहित्यमा पनि सौन्दर्य हुन्छ । तर, हामीले आफ्नो साहित्यमा जीवनका सौन्दर्य भेट्न सकेनौँ । जीवनका लय र सौन्दर्य ल्याउन सकेनौँ हामीले ।
साहित्यले समाजको चरित्र निर्माण गर्छ कि गर्दैन ?
चरित्र निर्माण गर्ने जिम्मा साहित्यले लिएको छ कि छैन, त्यो नै एउटा प्रश्न छ । चरित्र निर्माण गर्ने अध्यात्मले हो । अराजकहीन समाज निर्माण साहित्यले गर्दैन । ठेक्कापट्टा होइन साहित्य ।
लेखनका कुन विधाले साहित्यको धरातल माथि उठाउँछ ?
आख्यान र गैरआख्यान दुवैले, हाम्रो कला, शिल्प, भाषा माथि उठाउन सक्छ । हाम्रो भाषाको सौन्दर्यले नयाँ पुस्तालाई माथि उठाउन सक्नुपर्छ ।
यहाँ राम्रा समीक्षक छैनन्, लेखाइको कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन । लेखकले आफूलाई कसरी सुर्धादै लैजाने ?
पाठक छैनन् भन्न मिल्दैन । बरू लेखकले मिहिनेत गरेका छैनन् । समीक्षकको अभाव छ । आफ्नो लेखाइ सुर्धान नैतिकता चाहियो । लेखक इमानदार हुनुपर्‍यो ।
निबन्धहरूका रचनागर्भ के हुन् ?
समाजका विसंगति हुन मेरा निबन्धहरू । कसैले पनि सम्बोधन नगरेको विषयलाई निबन्धमा लेखेँ । राजनीतिले उपेक्षा गरेको, संस्कृतिले छिःछि, दुर्दुर गरेको दुनियाँ मेरो निबन्धमा लेखेको हुँ ।
Posted by Narthunge at 1:15 AM
मैलै देखेको विश्वयुद्ध
मान्छेलाई प्रेमले पनि मार्दोरहेछ म...
लामो बाटो र धेरै कुइनेटा छिचोलेँछु प्रस्तुति: दी...
ब्रिटेन युद्धताका एक युवतीको प्रेमकथा त्यतिवेला...